ओली सरकारले गर्‍यो पहिलो ‘पावरफुल’ निर्णय, क–कसको छुट्यो पसिना ? - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
ओली सरकारले गर्‍यो पहिलो ‘पावरफुल’ निर्णय, क–कसको छुट्यो पसिना ?
Published On : २९ चैत्र २०७४, बिहीबार ११:५७
काठमाडौं, २९ चैत । सरकारले यातायात सेवा समितिहरू खारेज गर्ने तयारी थालेको छ । संघसंस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका सेवा समितिहरू यातायातमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) लाद्न सक्रिय रहेको निष्कर्षसहित सरकारले खारेज गर्न खोजेको हो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएका यातायातसम्बन्धी कुनै पनि सेवा समिति नवीकरण गरिनेछैन । सरकारको कदमबाट ३ सय ५ यातायात सेवा समिति खारेज हुनेछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
गृहले यो नियम लागू गराए यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीबाट लगाइएको सिन्डिकेट कानुनी रूपमै अन्त्य हुनेछ । यातायात क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा २५ वर्षपछि आउनेछ । यातायात व्यवसायीको चर्को दबाबका कारण उक्त ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
अब कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुने : रामकृष्ण सुवेदी प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
१. नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ, काठमाडौं
२. पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति, बुटवल
३. पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति, पोखरा
४. नारायणी यातायात व्यवसायी समिति, वीरगन्ज
५. अरनिको यातायात सेवा समिति, काठमाडौं
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ भने सरकारी कदमको विपक्षमा छ । महासंघ अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचार्यले विनातयारी सरकार समिति खारेज गर्न लागेको बताए । उनले भने, ‘सरकार सेवा समिति खरेजीमा लागेको सुन्नमा आएको छ । सरकारले यो काम विनातयारी गर्दै छ । मुलुकभर ३ सय ५ सेवा समिति छन् । त्यससँग करिब २ लाख बस छन् । समिति खरेजीपछि उनीहरू कहाँ जाने ? कम्पनीमा दर्ता गर्न पनि समय त चाहियो नि ? यसको खाका के हो ? यी सबै पक्षको टुंगो नलगाई खरेजीको काम भइरहेको छ । हामी विरोधमा छौँ ।’